Ahoana no ahitako toeram-pamokarana avo lenta amin'ny fahefana ambony?
Raha heverinao ny maha-zava-dehibe ny backlinks ho toy ny singa manan-danja mamorona ny lanjany amin'ny valin'ny fikarohana Google, dia ny fanontaniana mahakasika ny tranokalan'ny backlink topika hampifandraisana amin'ny sy. Ny loharano avo lenta avo indrindra dia ny tranonkala misy manam-pahefana ambony (DA), ny fahefana an-tsoratra (PA), ary ny laharan'ny pejy (PR). Ireto misy loharanom-borona vitsivitsy ao amin'ny Social Media sy ireo tranonkalan-drakitra avo loha hevitra izay soso-kevitrao hijerena ny famerenana mivantana, voalohany indrindra: YouTube, Google Plus, Pinterest, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, Instagram, Share Share, Vimeo, Reddit, Flickr, Delicious, Word Press, Quora, Tumblr, sns.
Eny, ireo dia tokony ho fantatra amin'ny alalan'ny lionan'ny anjaran'ny mpampiasa aterineto maoderina. Ankoatra izany, raha ny marina dia izy ireo no toerana voalohany fitsidihana an'izao tontolo izao, sa tsy izany? Fa ahoana raha miteny aho hoe mbola misy toerana lehibe maro ahafahana miverin-dalana avo lenta, ankoatra ireo? Andeha hojerentsika ny fomba vitsivitsy ampiasaina mba hahazoana bakalorea mitovy amin'ny PR. Ny tetika manaraka dia matetika tsy tsidihin'ny tompona orinasa maro, ary na dia manam-pahaizana matihanina aza. Ireto misy izy ireo: manolotra fijoroana vavolombelona sy mamerina rohy na fampiasana HARO mba hanatontosana toeram-backlink top ambony miaraka amin'ny PR momba ny fifandraisana indrindra amin'ny vaovao.
Tsy ilaina ny milaza fa ny raharaham-barotra rehetra dia te-hahazo fanamarinana maro avy amin'ny mpanjifa sambatra araka izay azo atao. Tahaka ny ankamaroanay, mety ho efa nahazo vokatra tsara na serivisy ianao vao haingana, sa tsy izany? Noho izany, amin'ny fandefasana ny fijoroana vavolombelona, ​​dia azavao fa ny mpandraharaha orinasa dia hanana ny fijoroanao ho vavolombelona ao amin'ny pejy fandraisana na pejy hafa ho an'ny fanadihadiana sy ny fijoroana vavolombelona. Amin'izany fomba izany, tsy voatery hangataka alalana hiverina amin'ny tranokalanao ianao. Ny tiako holazaina dia ny hahalalanao izany amin'ny ankapobeny - mba hanaporofoana fa ny fijoroana vavolombelonao dia avy amin'ny olona tena izy
Ny famerenana dia vahaolana goavana koa asa. Mandehana mba hitady ny filazan'ny orinasa anao manokana, ary koa ny vokatra na ny fanompoana ny orinasa. Ny tanjona dia ny hahitana ireo voalaza ireo izay mbola miseho raha tsy manana ny rohy miaraka amin'izy ireo. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny fandefasana ireo olona voakasik'izany fampahatsiahivana tsara sy mailaka izany mba hahazoana antoka fa ny rohy dia ampidirina soa aman-tsara ao amin'ny tranonkala. Raha toa ianao ka misy fahasarotana amin'ny fitadiavana ny raharaham-barotra na ny anaranao, dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera toy ny BuzzSumo na ny fanamarihana. harato.
HARO (Manampy Mpanao gazety iray)
Io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana tombontsoa amin'ny rohy malemy amin'ny lanjany lehibe. Raha ny marina, HARO dia afaka manampy anao hanatontosa tranokalam-pifandraisana goavam-be miompana indrindra amin'ny vaovao. Raha vao nanao sonia ianao dia hahazo mailaka isan'andro avy amin'ireo mpanao gazety izay mila tetikasa fanoratana vaovao sy hevitra vaovao mifandraika amin'ny orinasanao na bilaogy. Aza misalasala manome valiny miaraka amin'ny tendron-tsakafo mahasoa, toro-lalana azo antoka, na fahaiza-mandanjalanja. Raha manao izany ianao, dia azo inoana fa ho tratran'ny rohy avy amin'ny tranokalam-baovao azo itokisana na tranonkala media ianao Source . Feo malaza, eh?